The Right Thing To Do: Basic Readings in Moral Philosophy by James Rachels — Reviews, Discussion, Bookclubs, Lists
Start by marking “The Right Thing To Do: Basic Readings in Moral Philosophy” as Want to Read:
The Right Thing To Do by James Rachels.
Preview — The Right Thing To Do
This collection of readings in moral theory and moral issues from major Western philosophers is the ideal companion reader for James Rachels' text The Elements of Moral Philosophy. The anthology explores further the theories and issues introduced in that volume, in their original and classic formulations. The collection can stand on its own as the text foracourse in mora
This collection of readings in moral theory and moral issues from major Western philosophers is the ideal companion reader for James Rachels' text The Elements of Moral Philosophy. The anthology explores further the theories and issues introduced in that volume, in their original and classic formulations. The collection can stand on its own as the text foracourse in moral philosophy, or it can be used to supplement any introductory text..
Be the first to askaquestion about The Right Thing To Do
မာတငလူသာကငး ကွယလွနပြီှးစပေါငးမားစွာအကြာ ဒနနီယယအဲဗကစ ငှကပောသီးကောကစားရတုနး၊ မာကစတို ဒီဗူးဘွားတို ကွယလွနပြီှးစပေါငးမားစွာအကြာ သနးကြွယသူဌေးတွေ ဘောလုံးကနတဲပွဲနဲ တိုကဆိုငနေလို ကောငးသူလေးတွေ အစုလိုကအပြုံလိုက ပြနပေးဆွဲခံရတဲကိစ္စကို လူတွေမေနေပြီး တိမမြုပနေရတုနး၊ ပစ္စညးဥစ္စာပိုငဆိုငခွငဟာ အခြေခံလူအခွငအရေးပါလို အားလုံးလကခံထားကြပြီး လူလတတနးစားတွေ ဘယလိုမှအိပမမကိုငတဲ စေးတွေကို "အကောငးဆုံးစေးတွေကိုတွေရမယ အိမခြံမြေလမးညန"ဆိုပြီး Facebook News feed ထိပဆုံးမှာ ခပတညတည ခပပြောငပြောင ကြောငြာနေရဲတုနး၊ (မြငးကစေးကြီးလို)
မာတင်လူသာကင်း ကွယ်လွန်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာ ဒန်နီယယ်အဲဗက်စ် ငှက်ပျောသီးကောက်စားရတုန်း၊ မာ့က်စ်တို့ ဒီဗူးဘွားတို့ ကွယ်လွန်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေ ဘောလုံးကန်တဲ့ပွဲနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့ ကျောင်းသူလေးတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စကို လူတွေမေ့နေပြီး တိမ်မြုပ်နေရတုန်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဟာ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးပါလို့ အားလုံးလက်ခံထားကြပြီး လူလတ်တန်းစားတွေ ဘယ်လိုမှအိပ်မမက်နိုင်တဲ့ ဈေးတွေကို "အကောင်းဆုံးဈေးတွေကိုတွေ့ရမယ့် အိမ်ခြံမြေလမ်းညွှန်"ဆိုပြီး Facebook News feed ထိပ်ဆုံးမှာ ခပ်တည်တည် ခပ်ပြောင်ပြောင် ကြော်ငြာနေရဲတုန်း၊ (မြင်းကဈေးကြီးလို့) သိုးတွေကတဆင့် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်နိုင်လိုက်တဲ့ ဆရာဝန်လေးတွေ တီဗီထဲမှာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားတဲ့ အပြုံးတွေနဲ့ပါနေတုန်း ရာစုနှစ်မှာ၊ သူများတွေဆီမှာ အမျိုးသမီးတွေ မဲပေးခွင့်ရပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရော မဲပေးစရာ ပါတီတောင် မရှိတဲ့ သောက်တလွဲနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ နေပြီး ကြက်ဝက်အခွင့်အရေးတို့ Animal right တို့လို အကြောင်းပြောရတာက မြွေပေါက်ရာတခြားသေးပန်းရာတခြားလိုတော့ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဒဿနအမြင်အရကြည့်ရင် ကျင့်ဝတ်စံမညီတာက မညီတာပဲ။ လုပ်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့အတွက် ဦးစားပေးကိစ္စ မဖြစ်နိုင်သေးတာက တစ်ပိုင်းပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အိမ်နားကဖြတ်ဖြတ်သွားတဲ့ သားသတ်ရုံပို့မယ် ၀က်တွေကို ပါးစပ်ထဲ အ၀တ်ဆို့ထားစေချင်တယ်၊ ၀က်သားဟင်းကြိုက်တဲ့ကိစ္စက ဒဿနိကဗေဒအပေါ် အမှီအခိုကင်းလွတ်တယ်။ မြွေကိုက်ခံရလို့ ဆေးရုံးပြေးပြီး ဘရိုခိုလီက ထုတ်တဲ့ အဆိပ်ဖြေဆေးမှ ကျွန်တော်ကထိုးမှာလို့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီညွတ်တဲ့မာနအကောင်းစားကြီးလည်း မထားရဲဘူး။ ဒီတော့လည်း တိရစ္ဆာန်တွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြန်သတိပြုမိတဲ့ သိစိတ်မျိုးမရှိလို့ သူတို့အပေါ်သက်ရောက်တဲ့ တာဝန်ယူမှုလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ အီမန်နွယ်ကန့်ကြီးရဲ့စကားကို ဇွတ်မှိတ်ကိုးကားရတော့မှာပဲ။ XP******လူသတ္တ၀ါအများစု၊ အထူးသဖြင့် မြို့ပြလို စက်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ နေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက် တခြား "သတ္တ၀ါမျိုးစိတ်" တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့အတွက် တိုက်ရိုက်အကျဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ထမင်းစားချိန်တွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သတ္တ၀ါတွေကို စားကြတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ (အာသာဖြေဖို့) ပန်းတိုင်အတွက် သူတို့ကို နည်းလမ်းတစ်ခုသက်သက်အဖြစ် အသုံးချလိုက်တာပါပဲ။ ဟင်းလျာတစ်မျိုးအဖြစ် အသုံးတော်ခံပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လျှာအရသာကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့် အဆင့်နိမ့်သတ္တ၀ါမျိုးစိတ်များအဖြစ်၊ သူတို့ရဲ့ ဘ၀နဲ့ ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ခွင့်ကို အဆင့်ချလိုက်တာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ လျှာအရသာလို့ တမင်သုံးလိုက်တာက ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အာသာဆန္ဒကို ပြေစေရုံသက်သက်ကိစ္စဖြစ်နေလို့ပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ လိုအပ်တဲ့အာဟာရကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စားသုံးရတာပါလို့ ဆင်ခြေပေးလို့မှ မဖြစ်နိုင်ပဲ၊ ပဲနဲ့ အခြား အသားဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အသားကရတဲ့ အသားဓာတ်ကို အစားထိုးနိုင်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပြီးသားပဲ။ကိုယ့်အာသာအတွက် အခြားသတ္တ၀ါမျိုးစိတ်တွေကို အသုံးချဖို့ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ အမြဲအသင့်အနေထားရှိနေတယ်ဆိုရာမှာလည်း သတ်ဖြတ်တဲ့ လုပ်ရပ်ချည်းသက်သက်ပဲတော့ မဟုတ်ဘူး။ အသတ်မခံရခင် အသက်ရှင်နေစဉ်မှာ သူတို့ နာကျင်ခံစားရတာတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မနုဿဝါဒကို ပိုပြီးတော့တောင် ရှင်းရှင်လင်းလင်း ညွှန်းနိုင်ပါသေးတယ်။ လူတွေဝယ်စားနိုင်တဲ့ ထမင်းစားပွဲပေါ်က အသားဟင်းတစ်ခွက်ရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ သတ္တ၀ါတွေကို သူတို့နဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ ကြပ်ကြပ်ညှက်ညှက် နေရာတွေမှာ မသေခပ်စပ်ကြား တစ်သက်တာလုံး နေထိုင်စေပြီး အသားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာအောင် လုပ်ကြတယ်။ တစ်ကောင်နှစ်ကောင်ဘ၀ကနေ အသားတုံးတစ်တုံးနှစ်တုံး အဖြစ် ပြောင်းလဲစရာ စက်ပစ္စည်းတွေလို့ပဲ သတ္တ၀ါတွေကို သဘောထားကြတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း အသားတုံးများများရဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမဆို အလွတ်မပေးဘဲ သုံးစွဲကြတယ်။ ဒီ (တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေး) ကိစ္စမှာ သြဇာရှိတဲ့ လူတစ်ယောက် ပြောဖူးသလိုပဲ "အကျိုးအမြတ်ရနိုင်မှု ချုပ်ငြိမ်းသွားမှပဲ ရက်စက်မှုဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်" တဲ့။ ဒီတော့လည်း လက်မနှစ်ဆယ်နဲ့ ဆယ့်ရှစ်လက်မအကျယ်သာရှိတဲ့ နျူးယော့ခ်တိုင်းသတင်းစာ တစ်ခြမ်းစာ၊ လှောင်အိမ်လေးတွေထဲမှာ ကြက်မလေးငါးကောင်လောက် စုပြုံနေကြရတယ်။ ကြမ်းပြင်ကျတော့လည်း ၀ါယာကြိုးနဲ့ ဇကာကွက်ယက်ထားတာ၊ ဒါမှ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတဲ့ စားရိတ်သက်သာမှာ။ ဒါပေမဲ့ ၀ါယာကြိုးဆိုတာက ကြက်တွေရဲ့ ခြေထောက်နဲ့ မသင့်လျော်ဘူး။ ပြီးတော့ ကြမ်းခင်းက ရေပြင်ညီမဟုတ်ဘဲ၊ ကုန်းလျောလေး လုပ်ထားတယ်၊ ဒါမှ ဥဥတဲ့အခါ အလိုလို လိမ့်ကျလာပြီး အလွယ်တကူ ကောက်ယူနိုင်အောင်လို့ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကုန်းလျောကြမ်းခင်းကြောင့် ကြက်မတွေဟာ သက်တောင့်သက်သာ အနားမယူနိုင်ဘူး။ ဒီလို ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေကြားမှာ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ ဗီဇစိတ်ဟာ ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံဖြစ်အောင် နှောင့်ယှက်ခံရတယ်၊ အတောင်ပံတွေကို ဖြန့်လို့မရဘူး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လမ်းလျှောက်လို့မရဘူး၊ ဖုတ်ထဲလူးပြီး ရေချိုးလို့မရဘူး၊ အစာယက်လို့မရဘူး၊ အသိုက်ဆောက်လို့ မရဘူး။ ဒီကြက်မကြီးတွေအနေနဲ့ အဲဒီလို ဘာသာဘာဝအခြေအနေတွေကို လုံးဝမသိရှိခဲ့ဖူးပေမဲ့၊ အဲဒီဗီဇသဘာဝလုပ်ရပ်တွေကို ပြုလုပ်ဖို့ အချည်းအနှီးကြိုးစားလေ့ရှိတာကို လေ့လာသူတွေက သတိပြုမိကြတယ်။ အဲဒီလို ဘာသာဘာဝအပြုအမူတွေကို ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း ကင်းမဲ့တဲ့အတွက် စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်ပြီး လယ်သမားတွေ "ကတော်" (#လှောင်အိမ်ထဲမှာ တစ်သက်လုံးနေသွားရတဲ့ ကြက်တွေ စိတ်ကျရောဂါကြောင့် ပြုလုပ်တတ်တဲ့အသံ၊ မြန်မာလို ကတော်တာနဲ့တော့နီးစပ်မယ်ထင်တယ်၊ တခြားစကားလုံးလည်း စဉ်းစားမရတော့ဘူး၊ ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်လုပ်နေတာမျိုးဖြစ်မယ်) တယ်လို့ခေါ်တဲ့ အသံတွေ ပြုလုပ်တတ်လာပြီး တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် သေတဲ့အထိ ထိုးဆိတ်တတ်ကြတယ်။ ဒါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကတော့ ကြက်ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းကနှုတ်သီးဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့။
Yeah, I was notafan.All of the readings are taken out of context with very poor background information. Everything felt like it was delivered throughavery biased, filtered view; it was very clear where Rachels stood from the very beginning. His portrayals of egoism seemed anything but fair. Two stars because it exploresavariety of views, but nothing more.
I have used this book and its companion volume for my intro to ethics courses. I would recommend the texts for instructors who want to make use of case-studies in applied ethics. However, I have to supplement the text insofar as primary source material is overlooked. Stuart Rachels hasapretty good suggested syllabus on his website.Pros: good for applied ethics, intuitive presentation, appropriate for 100-level courses, Cons: lack of primary source material, no meta-ethics, poor presentations o
I have used this book and its companion volume for my intro to ethics courses. I would recommend the texts for instructors who want to make use of case-studies in applied ethics. However, I have to supplement the text insofar as primary source material is overlooked. Stuart Rachels hasapretty good suggested syllabus on his website.Pros: good for applied ethics, intuitive presentation, appropriate for 100-level courses, Cons: lack of primary source material, no meta-ethics, poor presentations of egoism and virtue ethics
Specifically, the doctrine of Mookieism. Jan 19, 2008 09:41AM
In designingasyllabus for an undergraduate Intro to Ethics seminar, I neededabook that would collect together some seminal works in normative ethics. The challenge is to findavolume which includes readings from the most important thinkers, does so in an accessible way, and includes enough of the original texts to give some context for the ideas being put forward. Oh, and if the book doesn't cost studentsafortune, that is great, too. Rachels' anthology fit the bill perfectly.
Great selection of essays and articles on applied and meta- ethics. While the articles are largely cohesive they would be better understood withalittle more narration and reflection at the end of the chapters. the introductory chapter, while being informative feels insufficient.
This review refers to the 2010 (5th) edition. Appropriate read for the beginner who has at least some experience with philosophical debate.
The Right Thing To Do: Basic Readings in Moral Philosophy by James Rachels (2002)
Recommends it for: philosophy lovers
dense and full of jargon but important
Joseph De Robles
The Right Thing To Do: Basic Readings in Moral PhilosophyGoodreads rating: 3.49 (181 ratings)
[url=http://www.goodreads.com/book/show/878792.The_Right_Thing_To_Do?utm_medium=api&utm_source=blog_book]The Right Thing To Do: Basic Readings in Moral Philosophy by James Rachels[/url]